Lolita Monga sy Landy Volafotsy : Hilalao ny teatra « Manonoké fanahy » -
AccueilVaovao SamihafaLolita Monga sy Landy Volafotsy : Hilalao ny teatra « Manonoké fanahy »
Lolita Monga sy Landy Volafotsy : Hilalao ny teatra « Manonoké fanahy »
Mandalo fotoan-tsarotra ny tantara an-tsehatra na ny teatra malagasy amin’izao fotoana. Eo am-piandrasana izay mety hifohazany amin’ny endrika samihafa, dia ireo ivon-toeran-kolontsaina vahiny no miezaka mamelona izany. Mandalo eto amintsika ny kaompania avy any La Réunion Lolita Monga ary hiaraka hilalao an-tsehatra ilay tantara « Manonoké fanahy » amin’ny tarika Landy Volafotsy. Etsy amin’ny Istitut Français de Madagascar (IFM) Analakely no hanehoana izany ny sabotsy 15 septambra izao amin’ny 3 ora sy sasany.
Ny « Manonoké fanahy » dia angano sy tantara an-tsehatra notsoahana avy amin’ilay sary miaina « printsy vavy Manonoke » an’ilay teratany Japoney, Hayao Miyazaki. Ankoatra ny maha-zavakanto azy, dia sehatra iray entin’ny tarika roa tonta mitondra ady amin’ny endrika maro io tantara io, miainga amin’ireo tantaran’io printsy vavy io. Hita taratra ao anatin’izany ny habibiana, ny halemem-panahy, ny fanoherana, ny fanaovana tsinontsinona ary ny famoretana. Asehon’ny tantara fa manana mpiaro eto ny voajanahary manoloana ny fandringanana ataon’ny olombelona izay mikaroka ny tombontsoany. Olana eran’izao tontolo izao jerena amin’ny fomba fijery malagasy, ary zavatra maika ho an’ny malagasy aseho amin’ny endrika iraisan’izao tontolo izao.
Ezahin’ireo mpilalao entina an-tsehatra ny zava-misy tamin’ny tantaran’io printsy vavy io tany anaty sarimihetsika, saingy amin’ny endrika mivantana sy hita maso. Ho hita amin’ny fahitalavitra goavana ny sarin’ny tantara raha miezaka mitondra izany mivantana eny an-tsehatra ireo mpilalao sy ireo mpikirakira rehetra ny lafin’ny teknika amin’ny teatra toa izao.
Tarika iray hivondronana mpiray tampo ny tarika LandyVolafotsy, izay niorina ny taona 1973. Ireo zanak’i Oséam Rakoto, mpilalao teatra nanana ny lazany no nanangana ny tarika izay tarihin’i Doly Odeamson amin’ireo fotoana. Anisan’ireo nanavanana ny tarika ny findramana ireo tantara an-tsehatra nalaza sy nadika tamin’ny teny malagasy. Anisan’ny fantatra tamin’ireo teatra nolalaoviny ny « Opera Katisoa » an’i Bertold Brect, ny « Le Roi et l’Oiseau » an’i Jacques Prévert, « Mille Francs de Récompense » an’i Victor hugo…